Usoro ihe omuma ala: 30 vidio nkuzi
Nkọwa ihe omimi n'ime ihe niile anyị na-eme, na-eji ngwaọrụ elektrọnik, emeela ka GIS bụrụ ihe ngwa ngwa itinye n'ọrụ kwa ụbọchị. 30 afọ gara aga, ị na-ekwu maka nhazi, ụzọ ma ọ bụ maapụ bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ. Ndị ọkachamara na ndị na-ese ihe nkiri ma ọ bụ ndị njem nleta na-enweghị ike ime n'enweghị ...
AutoCAD Map Bentley Systems cadastre Ezie LibreCAD My egeomates
Akụziri CAD / GIS, Geospatial - GIS, mbụ echiche
Gbasara ohere Manager: Jikwaa gbasara ohere data rụọ ọrụ nke ọma, ọbụna site AutoCAD
Onye njikwa Spatal bụ ngwa maka njikwa data, yana na-arụ ọrụ onwe ya. O nwekwara ngwa mgbakwunye nke na-enye ike ikike geospatial na AutoCAD.
AutoCAD 2015 AutoCAD Map DGN dwg kml My mbụ echiche QGIS shp
5 nkeji tụkwasịrị obi GeoCivil
GeoCivil bụ blog na-atọ ụtọ gbadoro ụkwụ na ojiji nke ngwaọrụ CAD / GIS na mpaghara injinia obodo. Onye dere ya, onye obodo si El Salvador, bu ezi ihe omuma atu nke nghazi nke ulo akwukwo nke ogugu enweela-nke kachasi- obodo ndi mmuta na ntaneti; enweghị mgbagha dị ịrịba ama na ekele maka ...
AutoCAD-AutoDesk, mbụ echiche
Ihe Map AutoCAD, Map 3D Civil na Atụmatụ Desktọpụ
Cadapult kwupụtara n'oge na-adịbeghị anya mbipụta nke mbipụta ọhụrụ ya: Digging Deeper Into AutoCAD Civil 3D 2011 416 peeji nke a haziri na 7 isi na CD nke gụnyere mmemme e mepụtara na ngalaba nke ọ bụla, n'okpuru nduzi nke Rick Ellis. Na nkenke, nnukwu nnweta maka onye ọ bụla chọrọ ịmụta Civil 3D nke ọma ma mụbaa ...
AutoCAD Map obodo 3D
AutoCAD-AutoDesk, Akụziri CAD / GIS, topografia
Vidiyo ndị ọzọ maka Civil 3D, AutoCAD Map na Revit
Nke kachasị mma, mgbe AUGI MexCA gara na mmezi… Oge ụfọdụ gara aga, emere m nyocha nke AUGI na isi obodo ya, jiri akụ bara uru maka ndị ọrụ nke teknụzụ AutoCAD Civil3D na Map. O di nwute na akwukwo a abanyela ihe kariri otu afo gara aga, mmelite anyi na echere ...
AutoCAD-AutoDesk, Akụziri CAD / GIS, Engineering, topografia
CAD na-abịakwute GIS | GeoInformatics March 2011
Nke a ọnwa ọhụrụ mbipụta Geoinformatics -abịa, na nnọọ ike ike gburugburu na CAD, GIS, ime mmetụta, ime data njikwa; akụkụ ndị a na-agaghịzi ahụ anya na iche. Na ụkpụrụ m na-eweta nyocha nke otu n'ime isiokwu ndị kachasị amasị m, na njedebe ihe a chịkọtara isiokwu ndị ọzọ nke a ...
AutoCAD 2012 AutoCAD Map obodo 3D Magazines
Jikọọ na Data, Map AutoCAD - Map Bentley
Na nke a, achọrọ m iji atụnyere ụzọ esi enweta ọdụ data na nyiwe ihe ngosi AutoDesk na Bentley. Ejirila m nke a: AutoDesk Civil 3D 2008 (Nke gụnyere AutoCAD Map) Bentley Map V8i AutoCAD Civil 3D 2008 Bentley Map V8i Jikọọ: Faịlụ, jikọọ na Data… Jikọọ: Ntọala, nchekwa data, jikọọ…
Filesdị faịlụ, nke a maara dị ka .shp faịlụ ga-abụ usoro quaternary na usoro teknụzụ mana anyị enweghị ike izere na e mepụtara ha dịka ArcView 3x. Nke a bụ ihe kpatara eji eji ha eme ihe n'ọtụtụ ebe, ruo n'ókè nke na ọtụtụ nyiwe geospatial amalitela usoro iji soro ha rụọ ọrụ. ...
Muta AutoNad Civil 3D, ihe bara uru
Bụ onye otu AUGI Mexico bụ ọtụtụ uru, otu n'ime ha bụ ịnweta ngwaọrụ ma ọ bụ nkuzi iji mụta. N'okwu a, m na-ewetara nchịkọta nke kacha mma nkuzi na ojiji nke Civil 3D maka ụzọ, ọdịdị ala na ọdịdị ala. Fọdụ bụ vidiyo, ụfọdụ bụ faịlụ pdf. Ikwesiri ịdebanye aha na ...
AutoCAD Map AutoDesk obodo 3D dwg
AutoCAD-AutoDesk, Akụziri CAD / GIS, Geospatial - GIS, Engineering, topografia
Egwuregwu iji jikọọ AutoCAD na ArcGIS
Ka anyị dokwuo anya AutoCAD nke anyị anaghị ekwu maka AutoCAD Map ma ọ bụ Civil3D, nke jikọtara na ọrụ OGC mana na nsụgharị AutoCAD dị mfe 2007 gaa n'ihu, ya bụ, ebe ha nwere ọrụ ọdịdị. Ka anyị dokwuo anya ArcGIS: Ọ naghị ejikọ na Geodatabase ma ọ bụ ụlọ nchekwa mxd a na-echekwa na mpaghara ma ọ bụ site na ọrụ e mepụtara site na omenala ...
Map AutoCAD 3D akwado Linux
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na AutoDesk hapụrụ nkwado ya maka Linux oge ụfọdụ gara aga, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya ọ gbalịrị ịlaghachi, ya mere ọ kwupụtara n'oge na-adịbeghị anya ndakọrịta na nkwupụta a. Sistemu Virtualization Ngwa Citrix XenApp ọhụrụ na-enye ndị ahịa sọftụwia AutoCAD Map 3D ohere ịmepụta, kesaa ma jikwaa ...
Ihe Ngwá Ọrụ maka AutoCAD Map 3D 2009
Na Nọvemba, a ga-enwe nzukọ ọmụmụ AutoCAD Map 3D 2009 n’obodo dị iche iche na Spain yana ihe ngwọta maka mpaghara Topography, Water, Sanitation and Electricity. Ihe ị ga-atụ anya na Topography: A ga-ewepụta ngwaọrụ maka imepụta, iji anya na nyocha ụdị ọdịdị ala, yana maka imewe na usoro ...
AutoCAD-AutoDesk, Engineering, topografia
Nchịkọta maka ịhọrọ ngwọta GIS / CAD
Taa bụ ụbọchị m ga-ekpughere ndị isi ala nke Bolivia. Edebere isiokwu ahụ na ntụgharị uche nke otu esi ahọpụta ngwa ọrụ kọmputa maka mmepe geomatic. Nke a bụ eserese m jiri, na elekwasị anya m bụ nyocha nke gburugburu ebe anyị chere ...
ArcView AutoCAD Map AutoDesk obodo 3D ESRI Ezie gvSIG oS manifold GIS
Ngwa maka ecw ọrụ na AutoCAD
ERDAS ka kwuputara ngwa mgbakwunye ọhụrụ maka AutoCAD nke na-enye ohere ịnweta onyonyo (ECW na JPEG 2000) site na usoro akpọrọ ECWP. ECW bụ a format na nwere ọtụtụ uru, tumadi mkpakọ enweghị ịrịba ọnwụ, n'ihi na a 200 MB tiff oyiyi nwere ike itu ruo 8 MB; Ukwu…
Mepụta polygon na AutoCAD ma zipụ ya na Google Earth
Na nke a, anyị ga - eme usoro ndị a: Mepụta faịlụ ọhụrụ, webata isi site na faịlụ zuru ezu na Excel, mepụta polygon, nye ya ohere, ziga ya na Google Earth wee weta foto ahụ site na Google Earth na AutoCAD. Anyị hụrụ ụfọdụ n'ime usoro ndị a na mbụ. n'ụkwụ, na nke a, anyị ga-ahụ otu esi eme ha na AutoCAD ...
AutoCAD Map obodo 3D dwg Google Earth manifold GIS
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, topografia
Ego ole bụ AutoDesk ngwaahịa
Edere post a maka ajụjụ ụfọdụ m na-ahụkarị na nchịkọta Google Analytics: Ego ole ka AutoCAD bara uru? Ebee ka ịzụta AutoCAD? ... Nke a bụ ndepụta dị mkpirikpi nke ngwaahịa na ọnụahịa (ọ bụghị gụnyere ụtụ ahịa) nke dabere na mba ọ bụla Nkwalite ọnụahịa dị ala Ndị a bụ ọnụ ahịa mgbe ị na-azụ ihe na ntanetị ...
Ịbubata 3D Surface si Google Earth na AutoCAD
Tupu anyị ekwuo banyere otu esi ebubata onyonyo sitere na Google Earth na AutoCAD ugbu a, ka anyị hụ otu esi ebubata elu ma mee onyonyo a na agba ma nwee ike ichu nta na 3D a. Ihe a bu otu ihe anyi huru na Microstation, imeputa ihe obula ma dozie nsogbu nke onyonyo a di ...
AutoCAD Map AutoDesk obodo 3D Google Earth
Ngwakọta Ahịa AutoDesk Vs. Bentley
Nke a bụ ndepụta nke ngwaahịa AutoDesk na Bentley Systems, na-anwa ịchọta myirịta dị n'etiti ha, ọ bụ ezie na ọ siri ike n'ihi na ụfọdụ ngwa nwere otu nghazi, mana ụzọ ha anaghị adịkarị. Tupu anyị ahụ ụfọdụ mgbanwe nke AutoCAD na Microstation. Na nchịkọta, anyị nwere ike ị nweta nkwubi okwu ndị a: nyiwe ...
AutoCAD Map AutoDesk Bentley Systems obodo 3D dwg
Ansys Workbench 2020 Agụmakwụkwọ
Ansys Workbench 2020 R1 Ọzọkwa AulaGEO na-eweta onyinye ọhụrụ maka ọzụzụ na Ansys Workbench 2020 R1 ...